ဂြာမနီအသငျးနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ပှဲတိုငျး ဂိုးမသှငျးနိုငျသေးတဲ့ စီရျောနယျလျဒို – the One Sports Journal
ပျေါတူဂီအသငျးရဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားစီရျောနယျလျဒိုဟာ ယူရို-၂၀၀၄ အုပျစုပှဲစဉျ ဂရိနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ နိုငျငံအသငျးအတှကျ ပထမဆုံးဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီးကတညျးက အခုအခြိနျအထိ ရပျတနျ့လို့မရတဲ့ခွစှေမျးမြိုးပွသနပွေီး စုစုပေါငျး(၁၀၆)ဂိုးအထိသှငျးယူခဲ့ပွီးပါပွီ။ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ လကျရှေးစငျကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ပွိုငျဘကျ(၄၂)သငျးကို ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီး သူဂိုးအမြားဆုံးသှငျးယူခဲ့တာက လဈသူယေးနီးယားနဲ့ဆှီဒငျ(၇ဂိုးစီ)အသငျးတို့ဖွဈပါတယျ။
ယူရိုအုပျစုအဖှငျ့ပှဲအဖွဈ ဟနျဂရေီကို (၃)ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ (၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ယူရိုပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမား (၁၁ဂိုး)အဖွဈ ရပျတညျနပေမေယျ့ အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျပဲ ဂြာမနီအသငျးနဲ့ဆုံတှတေဲ့ပှဲတိုငျးမှာ စီရျောနယျလျဒို အခုအခြိနျအထိ ဂိုးပေါကျရှာမတှသေ့ေးပါဘူး။
ပျေါတူဂီအသငျးဟာ ဂြာမနီနဲ့ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားအုပျစု၊ ယူရို-၂၀၁၂ အုပျစု၊ ယူရို-၂၀၀၈ ကှာတားဖိုငျနယျ၊ ၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလားတတိယနရောလုပှဲအဖွဈ နောကျဆုံး(၄)ကွိမျဆုံတှခေဲ့တာမှာ အဲဒီပှဲတိုငျး စီရျောနယျလျဒို ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့သလို ပျေါတူဂီအသငျးကလညျး (၄)ပှဲစလုံးရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဂြာမနီနဲ့နောကျဆုံးဆုံတှခေဲ့တဲ့ (၄)ပှဲမှာ မိနဈပေါငျး(၃၆၀)ပါဝငျကစားခဲ့ပွီး ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှု (၂၃)ကွိမျအထိပွုလုပျခဲ့ပမေယျ့ တဈဂိုးမှမသှငျးနိုငျတာကတော့ ဆိုးရှားလှနျးပါတယျ။
စီရျောနယျလျဒို ဂိုးမသှငျးနိုငျသေးတဲ့အသငျးတှထေဲမှာ ဂြာမနီအသငျးအပွငျ စပိနျ၊ အင်ျဂလနျ၊ ပွငျသဈ၊ အီတလီစတဲ့ ထိပျသီးအသငျးတှပေါဝငျခဲ့ပါတယျ။ ပျေါတူဂီအသငျးဟာ ယူရိုအုပျစုအဖှငျ့ပှဲတုနျးက ဟနျဂရေီကို အနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ (၃)မှတျရရှိထားပမေယျ့ ဂြာမနီအသငျးကတော့ သူတို့ကှငျးမှာပဲ ပွငျသဈကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့အတှကျ အမှတျမရသေးလို့ အခုပှဲမှာ ရလဒျကောငျးမှ အုပျစုကတကျဖို့ မြှျောလငျ့နိုငျမှာပါ။ ပျေါတူဂီကတော့ ဂြာမနီကို အနိုငျရခဲ့ရငျ အုပျစုကတကျပွီဖွဈတာကွောငျ့ အခုကစားမယျ့ပှဲမှာ စီရျောနယျလျဒိုအနနေဲ့ သူ့ရဲ့မှတျတမျးဆိုးကို ခြိုးဖကျြပွီး ဂြာမနီကို အနိုငျရအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျမလား . . .
ဒါမှမဟုတျ ဂြာမနီအသငျးကပဲ (၁၅)နှဈအတှငျး ပျေါတူဂီကို မရှုံးဖူးသေးတဲ့အစဉျအလာကောငျးကို ဆကျထိနျးနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
ဂျာမနီအသင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်း ဂိုးမသွင်းနိုင်သေးတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို
ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားစီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ယူရို-၂၀၀၄ အုပ်စုပွဲစဉ် ဂရိနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးကတည်းက အခုအချိန်အထိ ရပ်တန့်လို့မရတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသနေပြီး စုစုပေါင်း(၁၀၆)ဂိုးအထိသွင်းယူခဲ့ပြီးပါပြီ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် ပြိုင်ဘက်(၄၂)သင်းကို ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး သူဂိုးအများဆုံးသွင်းယူခဲ့တာက လစ်သူယေးနီးယားနဲ့ဆွီဒင်(၇ဂိုးစီ)အသင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ယူရိုအုပ်စုအဖွင့်ပွဲအဖြစ် ဟန်ဂေရီကို (၃)ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ (၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ယူရိုပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား (၁၁ဂိုး)အဖြစ် ရပ်တည်နေပေမယ့် အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ ဂျာမနီအသင်းနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့ပွဲတိုင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒို အခုအချိန်အထိ ဂိုးပေါက်ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။
ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ဂျာမနီနဲ့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စု၊ ယူရို-၂၀၁၂ အုပ်စု၊ ယူရို-၂၀၀၈ ကွာတားဖိုင်နယ်၊ ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားတတိယနေရာလုပွဲအဖြစ် နောက်ဆုံး(၄)ကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့တာမှာ အဲဒီပွဲတိုင်း စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့သလို ပေါ်တူဂီအသင်းကလည်း (၄)ပွဲစလုံးရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဂျာမနီနဲ့နောက်ဆုံးဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ (၄)ပွဲမှာ မိနစ်ပေါင်း(၃၆၀)ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု (၂၃)ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ဂိုးမှမသွင်းနိုင်တာကတော့ ဆိုးရွားလွန်းပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးမသွင်းနိုင်သေးတဲ့အသင်းတွေထဲမှာ ဂျာမနီအသင်းအပြင် စပိန်၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီစတဲ့ ထိပ်သီးအသင်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ယူရိုအုပ်စုအဖွင့်ပွဲတုန်းက ဟန်ဂေရီကို အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် (၃)မှတ်ရရှိထားပေမယ့် ဂျာမနီအသင်းကတော့ သူတို့ကွင်းမှာပဲ ပြင်သစ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက် အမှတ်မရသေးလို့ အခုပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းမှ အုပ်စုကတက်ဖို့ မျှော်လင့်နိုင်မှာပါ။ ပေါ်တူဂီကတော့ ဂျာမနီကို အနိုင်ရခဲ့ရင် အုပ်စုကတက်ပြီဖြစ်တာကြောင့် အခုကစားမယ့်ပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းဆိုးကို ချိုးဖျက်ပြီး ဂျာမနီကို အနိုင်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မလား . . .
ဒါမှမဟုတ် ဂျာမနီအသင်းကပဲ (၁၅)နှစ်အတွင်း ပေါ်တူဂီကို မရှုံးဖူးသေးတဲ့အစဉ်အလာကောင်းကို ဆက်ထိန်းနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။